काठमाडौं उपत्यकामा घट्यो कोरोना संक्रमण, आज कहाँ कति संक्रमित थपिए ? Canada Nepal
काठमाडौं - देशभर आइतबार र सोमबार ६ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल र जुकाको औषधि खुवाइँदै छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार र सोमबार देशभरका ६ देखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल र १२ देखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधिसमेत खुवाइनेछ ।
सरकारले देशभरका प्रत्येक वडामा तोकिएका खोप केन्द्रमा आफ्ना बालबालिकालाई लगेर भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन अनुरोध गरेको छ ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष ३ र ४ कात्तिकमा भिटामिन ‘ए’ खुवाउँदै आएकोमा यसवर्ष दसैँ परेकाले ७ र ८ कात्तिकमा खुवाउन लागिएको हो ।
कार्तिक ७, २०७८ आइतवार ०७:४४:५५ बजे : प्रकाशित
कोरोनाभाईरसको नयाँ स्वरुप डेल्टा प्लस अन्य भेरिअन्टभन्दा झन् चाँडो फैलिन सक्ने
लन्डन - कोरोनाभाईरसको नयाँ स्वरुप डेल्टा प्लस अर्को स्वरुप डेल्टा भेरिअन्टभन्दा झन चाँडो फैलन सक्ने बेलायतका विज्ञहरुले साबधानी दर्शाएका छन् । बेलायतको स्वास्थ्य सुरक्षा निकाय यूकेएचएसएले नयाँ स्वरुपको कोभिडलाई अनुसन्धानको क्रममा रहेको भेरिअन्टको रुपमा वर्गीकरण गर्दै यस्तो साबधानी दर्शाएको हो ।
पछिल्लो समयमा बेलायतमा डेल्टा प्लसबाट संक्रमित हुनेको संख्या बढिरहेको छ । एक तथ्यांकअनुसार बेलायतमा पछिल्लो पटक भेटिएका कूल संक्रमितमध्ये ६ प्रतिशत कोभिड डेल्टा प्लसबाट प्रभावित छन् ।
डेल्टा भेरिअन्टको तुलनामा डेल्टा प्लस संक्रमणको दर बढी हुन सक्ने केही प्रारम्भिक प्रमाण भेटिएको जनाइएको छ । बेलायतमा दैनिक ५० हजार भन्दाबढीमा कोभिड संक्रमण देखिएको छ ।
नयाँ स्वरुपको भाईरस व्यापक रूपमा फैलिन सक्ने विज्ञहरुले चेतावनी दिँदै आएका छन् । अहिले विश्वभर कोरोना भाइरसका अनगिन्ति भेरिअन्टहरू देखा परिरहेका छन् । भाइरस परिवर्तन भइरहने भएकोले नयाँ भेरिअन्ट देखिनु अनौठो भएको विज्ञहरु बताउछन् । एजेन्सी
कार्तिक ७, २०७८ आइतवार १०:४२:०९ बजे : प्रकाशित
नेपालमा एकैदिन ५ सय ५७ जनामा कोरोना संक्रमण, सक्रिय संक्रमित कति ?
काठमाडौँ। सरकारले पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर थप ५ सय ५७ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ ।
आइतवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार ७ हजार ६ सय २५ वटा परीक्षण गर्दा ५ सय ५७ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । यससँगै कूल संक्रमितको संख्या ८ लाख ९ हजार ५६ (पीसीआर टेस्टबाट) र (एण्टीजेनबाट) ९४ हजार १५ पुगेको छ।
साथै पछिल्लो २४ घण्टामा ८ सय ७७ जना कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएसँगै निको हुनेको कूल संख्या ७ लाख ८७ हजार ५ सय ७ पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै हालसम्म सक्रिय संक्रमित १० हजार २ सय १ जना रहेका छन् ।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएका र त्यसअघि भएका गरी थप ३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ११ हजार ३ सय ४८ जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्तिक ७, २०७८ आइतवार १८:०४:५२ बजे : प्रकाशित
अमेरिकाले दिएको एकलाख मात्रा खोप नेपाल आउँदै
काठमाडौँ - अमेरिकाले अनुदानमा दिएको एकलाख ६२० मात्रा फाइजर खोप सोमबार नेपाल आइपुग्ने भएको छ ।
अमेरिकी दूतावासले ट्वीट गर्दै एकलाख ६२० मात्रा फाइजर खोप अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । सो खोप आज नेपाल आइपुग्ने भएको हो ।
यसअघि गत असारमा पनि अमेरिकाले जन्सन एण्ड जन्सनको १५ लाख तीन हजार मात्रा खोप अनुदानमा नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो ।
कार्तिक ८, २०७८ सोमवार ०८:१६:०४ बजे : प्रकाशित
अमेरिकाले दिएको एकलाख मात्रा खोप नेपाल आइपुग्यो
काठमाडौँ - अमेरिकाले अनुदानमा दिएको एकलाख ६२० मात्रा फाइजर खोप सोमबार नेपाल आइपुगेको छ ।
कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)मार्फत उपलब्ध गराइएको फाइजर खोप कतार एअरवेजको विमानबाट आज बिहान नेपाल आएको हो ।
यो खोप एक महिनाको अवधिमा दुई डोज लगाउनुपर्नेछ । अनुदानमा आएको खोप सुरुमा १२ वर्षमाथिका दीर्घ रोगीलाई लगाइने जनाइएको छ ।
कार्तिक ८, २०७८ सोमवार १०:१९:०२ बजे : प्रकाशित
काठमाडौँ। सरकारले पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर थप ७ सय ७६ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ ।
सोमवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार १० हजार ८ सय ६४ वटा परीक्षण गर्दा ७ सय ७६ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । यससँगै कूल संक्रमितको संख्या ८ लाख ९ हजार ७ सय २९ ९पीसीआर टेस्टबाट० र ९एण्टीजेनबाट० ९४ हजार १ सय १८ पुगेको छ।
साथै पछिल्लो २४ घण्टामा ५ सय १ जना कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएसँगै निको हुनेको कूल संख्या ७ लाख ८८ हजार ८ पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै हालसम्म सक्रिय संक्रमित १० हजार ३ सय ६० जना रहेका छन् ।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएका र त्यसअघि भएका गरी थप १३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ११ हजार ३ सय ६१ जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्तिक ८, २०७८ सोमवार १८:१६:३१ बजे : प्रकाशित